Alatsinainy faha-20 mandavantaona – Trinitera Malagasy
Ezekiela 24, 15-24/Det 32, 18-21
Mpitsara 2, 11-19/Salamo 105
Md Matio 19, 16-22
Mandehana, amidio ny fanananao, ka omeo ny mahantra dia hanana rakitra any an-danitra ianao. Izany no lalam-pahalavorariana mitondra any amin’ny fiainana mandrakizay atoron’i Jesoa antsika. Izay te ho zanaka marina manko, ka afaka mandova ny Fianana dia tsy afaka ny tsy hizara amin’ny rahalahy ny anjara lova, tsy any an-koatra ihany fa dia ny ety an-tany koa.
Ny firaiketam-po amin’ny harena mandalo anefa mamitaka, mangeja ny Teny ka tsy hahafahany mamokatra (Mt 13, 22). Lazain’i Paoly aza moa fa ny fitsiriritana harena sy ny fitiavam-bola no loharanon’ny ratsy rehetra (1Tm 6, 10). Sarotra ny manesotra ny fo amin’izay iraiketany, izany no mila itandremana sao miraikitra amin’ny zava-mandalo ny fontsika ka tsy hahafoy izany mba higohana ny hamamin’ny mandrakizay.
Ny didy asain’i Jesoa tandremana dia tsy inona fa torolalana hahafahana mizotra araka ny lalàn’Andriamanitra, mizotra mankany amin’ny fahasambarana nampanantenainy. Fitiavana no famintinana ireo. Ny fitiavana no mampisy heviny ny fiainana; izay ataontsika amin’ny hafa maimaim-poana no rakitra tsy tontan’ny ela ho antsika any an-danitra. Raha tiantsika ny ho lavorary, ny teny grika moa τέλειος (teleios), dia midika hoe ho tojo amin’ny farany, dia tsy tokony hitahiry sy hiahy ho an’ny ampitso isika fa hizara ny fananana manontolo ho an’ny hafa. Ny fitiavan-tena dia mampitokana amin’ny rahalahy ary mampanalavitra antsika kosa amin’ny fitokisana amin’ny Ray izay mitsinjo ny zanany rehetra.
Ny hambom-po sy ny hafanam-po toa afo-mololo dia mety ho lefy vetivety. Mety ho fitia te hisehoseho fotsiny manko, na mety ho ny tahotra no hanarahantsika ny Didy. Ny fahaizana mizara ny fananana ho an’ny hafa kosa ka hampisokatra ny fo ho afaka hanaraka an’i Jesoa dia lalana mitondra antsika amin’ny tanjona irina: ny fiainana mandrakizay. Tsy ny rehetra anefa no afaka hahazo izany teny izany.
Angatahontsika ny fahasoavana mba tsy hiverenantsika any an-trano amin-kalahelo fa kosa amin-kafaliana, satria efa nahita ilay rakitra nafenina isika, efa nahita ny voahangy sarobidy ka tsy misalasala mahafoy izay hananana mba hahazoana ny mandrakizay.